Nyaya Youpenyu: Basa Renguva Yakazara kuArctic Circle | Yokudzidza
Makore 50 Ebasa Renguva Yakazara Pedyo neArctic Circle
Yakataurwa naAili Uye Annikki Mattila
“Zviri nyore kuti upayone. Vabereki vako vari muchokwadi, uye vanogona kukutsigira,” takaudza shamwari yedu yaiva mubasa renguva yakazara mashoko aya. “Mirai ndikuudzei! Tose tina Baba vamwe chete,” akapindura kudaro. Mhinduro yake yaiva nechidzidzo chinokosha: Baba vedu vokudenga vanotarisira vashumiri vavo uye vanovasimbisa. Zvechokwadi, zvakaitika kwatiri zvinoratidza kuti ichocho ichokwadi.
TAKABEREKWA tiri vana gumi uye taigara papurazi kuNorthern Ostrobothnia, Finland. Tainge tichiri vana pakarwiwa Hondo Yenyika II. Kunyange zvazvo taigara kure nekwairwiwa, takaramba tichifunga nezvokutyisa kwehondo. Maguta aiva pedyo eOulu neKalajoki paakabhombwa, takaona zimoto mudenga usiku. Vabereki vedu vaitikurudzira kuti tihwande pataiona ndege dzehondo dzichipfuura. Saka hanzvadzi yedu Tauno, dangwe, paakatiudza nezvenyika inenge yava paradhiso musina zvakaipa, takafara chaizvo.
Tauno akadzidza chokwadi cheBhaibheri aine makore 14 achishandisa mabhuku eVadzidzi veBhaibheri. Pakatanga Hondo Yenyika II, akaramba kupinda muchiuto nemhaka yehana yakadzidziswa neBhaibheri uye akaiswa mujeri. Akatambudzwa chaizvo ari imomo. Izvozvo zvakatoita kuti anyanye kushinga kushumira Jehovha uye paakabudiswa, akatowedzera kushingaira muushumiri. Zvakaitwa nehanzvadzi yedu zvakatikurudzira kuenda kumisangano yeZvapupu yaiitwa mumusha waiva pedyo. Taipindawo magungano kunyange zvazvo taitofanira kushanda nesimba kuti tiwane mari yaikwana. Taisonera vavakidzani zvipfeko, tairima hanyanisi, uye taitanha michero. Sezvo taiva nemabasa akawanda papurazi redu, taisakwanisa kupinda magungano pamwe chete, saka taiita zvokuchinjana.
Kubva kuruboshwe: Matti (baba), Tauno, Saimi, Maria Emilia (amai), Väinö (mwana), Aili, uye Annikki muna 1935
Chokwadi chatakadzidza nezvaJehovha uye zvinangwa zvake chakaita kuti tiwedzere kumuda uye takasarudza kuzvitsaurira kwaari. Muna 1947, takaratidza kuzvitsaurira nokubhabhatidzwa mumvura. (Annikki aiva nemakore 15 uye Aili aiva ne17.) Sisi vedu Saimi vakabhabhatidzwawo gore iroro. Takadzidzisawo Bhaibheri vamwe sisi vedu, Linnea, vainge vakaroorwa. Ivo nemhuri yavo vakavawo Zvapupu zvaJehovha. Patakabhabhatidzwa, takasarudza kuti taida kuzopota tichitora upiyona hwezororo (kana kuti, hwebetsero).
KUPINDA MUUSHUMIRI HWENGUVA YAKAZARA
Kubva kuruboshwe: Eeva Kallio, Saimi Mattila-Syrjälä, Aili, Annikki, naSaara Noponen muna 1949
Muna 1955 takatamira kuKemi, guta riri kuchamhembe. Kunyange zvazvo tose taienda kubasa, taida kuva mapiyona asi taityira kuti taisazokwanisa kuzviriritira. Takafunga kuti taifanira kutanga tambounganidza mari. Ndipo patakakurukura nehanzvadzi yaipayona yataurwa patangira nyaya ino. Izvi zvakatibatsira kuona kuti kushumira Jehovha nguva yakazara hazvirevi kuti unofanira kunge uine zvaunazvo kana kuti uchitsigirwa nemhuri. Chinonyanya kukosha ndechokuti tivimbe naBaba vedu vokudenga.
Pataienda kugungano kuKuopio muna 1952. Kubva kuruboshwe: Annikki, Aili, Eeva Kallio
Panguva iyoyo, tainge tachengeta mari yokushandisa kwemwedzi miviri. Saka muna May 1957, takarovera mwoyo kudombo ndokukumbira kuva mapiyona kwemwedzi miviri muPello, guta riri muLapland, kumusoro kweArctic Circle. Papera mwedzi yacho miviri, tainge tichine mari yedu yose yatainge tachengeta, saka takakumbira kuva mapiyona kwemimwezve mwedzi miviri. Payakazopera, tainge tichine mari yedu yose. Iye zvino tainge tava nechokwadi chokuti Jehovha aizotitarisira. Iye zvino papera makore 50, asi tichingori nemari yedu yatainge tachengeta! Patinofunga zvave zvichiitika, tinonzwa sokuti Jehovha akatibata maoko achitiudza kuti: ‘Musatya. Ini ndichakubatsirai.’—Isa. 41:13.
Iye zvino papera makore 50, asi tichingori nemari yedu yatainge tachengeta!
Kaisu Reikko naAili vari muushumiri
Muna 1958, mutariri wedu wedunhu akatikurudzira kuti tinova mapiyona chaiwo kuSodankylä, Lapland. Panguva iyoyo, imwe hanzvadzi ndiyo yaingova Chapupu chete munzvimbo yacho. Yainge yadzidza chokwadi nenzira inonakidza. Mwanakomana wayo ainge ashanya kuHelsinki, guta guru reFinland nevamwe vomukirasi make. Pavaifamba muguta, imwe hanzvadzi yakura yakatambidza Nharireyomurindi mukomana wacho aiva pokupedzisira mumutsetse uye yakamukumbira kuti anoipa amai vake. Mukomana wacho akanoipa amai vake uye vakabva vangoona kuti ichi chaiva chokwadi.
Tairenda imba yaiva pamusoro pezimba raichekerwa mapuranga. Ndimo mataipindira misangano. Pakutanga, taingopinda misangano nehanzvadzi yacho nemwanasikana wayo. Taiverenga zvaidzidzwa tiri pamwe chete. Papfuura nguva, mumwe murume ainge adzidza Bhaibheri neZvapupu akauya kuzoshanda paichekwa mapuranga. Iye nemhuri yake vakatanga kuwadzana neboka redu. Nokufamba kwenguva iye nemudzimai wake vakabhabhatidzwa. Hama iyi ndiyo yaitungamirira misangano yedu. Uyewo vamwe varume vaishanda ipapo vakatanga kupinda misangano uye vakabvuma chokwadi cheBhaibheri. Makore mashoma akazotevera, boka redu rainge rakura zvokuti rakava ungano.
MATAMBUDZIKO ATAISANGANA NAWO
Madaro marefu aiita kuti basa redu rokuparidza riome. Muchirimo, taifamba netsoka, nemabhasikoro uye pamwe pacho neigwa kuti tishanyire vanhu mundima yedu. Mabhasikoro edu aitibatsira chaizvo. Taiashandisawo pataienda kumagungano uye kushanyira vabereki vedu vaigara kure nemazana emakiromita. Muchando, taikwira bhazi mangwanani-ngwanani toenda kune mumwe wemisha yemunharaunda iyoyo tofamba paimba neimba. Tapedza musha wacho wose, taifamba kuenda kune unotevera. Kwainge kuine sinou (chando chakaumbana) yakawanda uye dzimwe nguva yaisabviswa mumigwagwa. Taiwanzotevera mainge mapfuura nezvirei zvaidhonzwa nemabhiza. Dzimwe nguva chando chaivhara mainge mambofambwa nevamwe uye mwaka wacho wava kunopera, chando chacho chainyunguduka uye tainetseka chaizvo kufamba.
Tiri muushumiri kuchitonhora chaizvo
Kutonhora chaizvo kwokunze uye chando chainaya zvakatidzidzisa kupfeka zvinodziya. Taipfeka masokisi eshinda tovirikidza mamwe masokisi maviri kana matatu tochipfeka majombo. Kunyange zvakadaro, majombo edu aiwanzozara nesinou. Pataisvika pamasitepisi emba, taibvisa majombo edu toazunza kuti sinou ibude. Uyewo pataifamba muchando, majasi edu ainyorova nechokumupendero. Uye pakwainyanya kutonhora, mipendero yacho yaiomarara ichiita semarata. Mumwe mukadzi akati, “Vanhu imi mune kutenda chaiko, kubuda panze kuchitonhora kudai.” Tainge tafamba makiromita 11 kuti tisvike paimba iyoyo.
Taiwanzorara mudzimba dzevanhu pamusana pemadaro marefu ataifanira kufamba. Pakwaisviba, taikumbira pokurara. Misha yacho yaisava yemaoresa asi vanhu vacho vaiva noushamwari uye mutsa, vaitipa pokurara uyewo zvokudya. Taiwanzorara pamatehwe emhuka dzakasiyana-siyana. Pamwe pacho taimbodyawo namambo. Somuenzaniso, mumwe mukadzi akatiendesa muimba yepamusoro yevaenzi mataizorara maiva nemubhedha wakanaka chaizvo waiva nemachira machena akachena aiva nemaresi. Kakawanda taikurukura Bhaibheri nemuridzi wemba kusvika usiku. Pane imwe imba, baba naamai vepo vakarara kune rimwe divi isu kune rimwe. Takaramba tichikurukurirana Magwaro kusvikira kwava kuda kuedza. Murume wacho nomudzimai wake vairamba vachichinjana kutibvunza mibvunzo.
USHUMIRI HUNE ZVIBEREKO
Lapland inyika isina zvakawanda zvinokuramo asi inoyevedza uye kuyevedza kwayo kunoenderana nemwaka. Asi vanhu vaida Jehovha ndivo vaiyevedza kupfuura zvimwe zvose. Vamwe vanhu vaida chokwadi vaiva vatemi vemiti vaiuya kuzodzika misasa muLapland. Dzimwe nguva, taipinda mukamba kaiva nevarume vakawanda tingori vaviri. Mazirume iwayo aiteerera mashoko eBhaibheri uye aitambira mabhuku edu achifara.
Pane zvakawanda zvaitinakidza. Rimwe zuva, wachi yaiva muchiteshi chemabhazi yaiva mberi nemaminitsi mashanu, saka takasvika bhazi raenda. Takafunga kukwira rimwe bhazi raienda kune mumwewo musha. Tainge tisati tamboshanda mundima iyoyo. Paimba yokutanga, takaona mumwe mukadzi wechiduku akati, “Mauya asikana, ndanga ndakatokumirirai.” Taidzidza Bhaibheri nasisi vake. Ainge audza sisi vake kuti vatikumbire kuzomushanyira zuva iroro chairo. Asi vainge vasina kusvitsa shoko racho. Takatanga kudzidza naye Bhaibheri uye nehama dzake dzaigara muimba yaiva pedyo. Pasina nguva, takavabatanidza vose vari 12 tikatanga kuvadzidzisa vari pamwe chete. Kubva ipapo, vakawanda vemhuri iyi vakava Zvapupu zvaJehovha.
Muna 1965, takanzi tinoshandira kuungano yatiri iye zvino muKuusamo, iri nechepazasi peArctic Circle. Panguva iyoyo, ungano yacho yaingova nevaparidzi vashomanana. Pakutanga, ndima yedu itsva yaiita seyakati omei. Vanhu vacho vaida chaizvo zvokunamata asi vaisatifarira. Asi vakawanda vairemekedza Bhaibheri, zvokuti taiwana pokutangira kukurukura navo. Saka zvishoma nezvishoma takaedza kudzidza vanhu vacho uye papfuura anenge makore maviri zvainge zvava nyore kutanga zvidzidzo zveBhaibheri.
TICHIRI KUSHINGAIRA MUUSHUMIRI
Vamwe vatakadzidzisa chokwadi
Iye zvino hatichakwanisi kuswera muushumiri asi tichiri kubuda anenge mazuva ose. Kuparidza mashoko akanaka kuvanhu vomundima yedu yakakura kwakava nyore Aili paakakurudzirwa nemwana wehanzvadzi yedu kudzidzira kutyaira uye paakatora chitambi muna 1987 aine makore 56. Takabatsirwazve pakavakwa Imba yoUmambo itsva uye takatamira kunogara muimba yayakabatana nayo.
Kuwedzera kwakaita vaparidzi kunoita kuti tifare chaizvo. Patakatanga basa renguva yakazara nechokuchamhembe muFinland, kwaingova nevaparidzi vashoma vaiva kure nakure munzvimbo iyoyo yakakura. Iye zvino kwava neungano dzinoverengeka dzinotokwana dunhu. Kakawanda pamagungano, mumwe munhu anouya otaura zita rake obvunza kana tichiri kumuyeuka. Pamwe pacho kungava kuti taiitisa chidzidzo cheBhaibheri pamba pavo iye achiri mwana. Mbeu yainge yadyarwa makore kana kuti makumi emakore akapfuura yainge yabereka zvibereko!—1 VaK. 3:6.
Tinonakidzwa noushumiri kunyange kuchinaya
Muna 2008 takasvitsa makore 50 tiri mapiyona chaiwo. Tinoonga Jehovha kuti takakwanisa kukurudzirana kuti titsungirire mubasa rake rinokosha. Tave tisina zvakawanda muupenyu asi hatina chatakamboshayiwa. (Pis. 23:1) Zvechokwadi paisava nechikonzero chokuti tityire kuita basa iri! Tinofara kuti Jehovha ave achitisimbisa kwemakore ose aya maererano nevimbiso yake iri pana Isaya 41:10 inoti: “Ndichakusimbisa. Chokwadi ndichakubatsira. Chokwadi ndicharamba ndakakubata zvakasimba noruoko rwangu rworudyi rwokururama.”